Aba Makhosi bandibuza incwadi yamachaphaza, ijenali yembumbulu. Ndiyicelile kuba ekubeni yayinamachaphaza, kwabonakala kum ukuba ndiyakwazi ukubamba ngcono iimbono zamaqhekeza, izinto eziqanjiweyo, njl.
Kwaye inyaniso kukuba iingongoma zibonelela ngokulinganisela okugqibeleleyo kunye nesalathiso esifihlakeleyo kunye nomlinganiselo wayo ofanelekileyo. Bayabunqanda ubugxwayiba obenzeka kwiincwadi zamanqaku ezingabhalwanga ngenxa yokungabi nazimbekiselo kwaye banqanda ukugcwala kweencwadi zamanqaku ezisikwere, nokwandisa iireferensi ezithe nkqo ezithi, umzekelo, zingabikho kwiincwadana zamanqaku.
Ukuba ufuna cima yonke imiyalezo yomsebenzisi kwiforum ye-vBulletinNdinishiya iindlela ezimbini ezahlukeneyo zokuyenza. Igrafu kunye nenye ehlasela isiseko sedatha.
Ukuba umsebenzisi unenani eliqhelekileyo lemiyalezo, ifom yegraphic enesixhobo se-vBulletin yeyona nto ilungileyo kwaye incinci inobungozi.
Kwenzeke kum amaxesha amaninzi ukuba xa simodareyitha iforum sibona ukuba kufuneka siyicime yonke imiyalezo yomsebenzisi, mhlawumbi ngenxa yokuba ayifanelekanga, okanye ngenxa yokuba i-spam okanye ngenxa yokuba umsebenzisi esicela ukuba siyicime iprofayili yakhe kwaye yonke imiyalezo yakhe.
Esi sifundo seyevBulletin 4.xx iinguqulelo andazi ukuba isebenzele 5.x kuba khange ndiyivavanye kwaye andazi nesakhiwo sedatabase yayo.
Iphepha1 Iphepha2 ... Iphepha57 Elandelayo →